Netherlands Zvino Yapinda Mukuvhara Kwakaoma pamusoro peKisimusi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Netherlands Kuputsa Nhau » Netherlands Zvino Yapinda Mukuvhara Kwakaoma pamusoro peKisimusi
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Netherlands Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mufananidzo unofadza Ernesto Velázquez kubva kuPixabay
Omicron yakonzera kuwedzera kwe25% muyero yenyaya nyowani muAmsterdam, Netherlands. Mukupindura, hurumende iri kuvhara zvese pasi. Mutungamiri Mark Rutte anodana zvirambidzo "zvisingadzivisike."
Pakuungana kweKisimusi, zvinosuwisa kuti izvi zvinoreva kuti havapfuuri vaenzi vana vanopfuura makore gumi nematatu pamhuri kubva muna Zvita 4-13 uye paZuva Regore Idzva. Kushanda mangwana, Svondo, Zvita 24, 26, nhamba yepamusoro yevaenzi vepamba i19.
Mutungamiriri Rutte akati: "Kuzvipedzisa mumutsara mumwe, Netherlands ichadzokera mukuvhara kubva mangwana. Ndakamira pano manheru ano ndakashungurudzika. Uye vanhu vazhinji vanoona vachanzwa saizvozvo, zvakare. "
Zvikoro zvese zvakavharwa uye zvicharamba zvakadaro kusvika kana Ndira 9, 2022. Mamwe matanho ekuvhara acharamba achishanda kusvika kana Ndira 14.
Mitemo mitsva inokurudzira vanhu kuti vagare pamba. Mutungamiriri wenyika akati kutadza kuita izvozvi kungangokonzera "mamiriro asingagadzirike muzvipatara."
Kunyangwe nguva dzekusvika pamba dzakaiswa munzvimbo dzekugamuchira vaeni uye dzetsika muNetherlands mumavhiki akati wandei apfuura mukuyedza kudzikamisa mhedzisiro yeOmicron, iyo inopararira inoramba ichipararira semoto wesango. Pave nemhosva dzinodarika miriyoni mazana maviri nemazana mapfumbamwe ezviuru zveconavirus zvakashumwa munyika kubva pakatanga denda nenzufu dzinodarika zviuru makumi maviri.
Vakuru veNetherland vari kukurudzira vanhu kuti vabaiwe nhomba.
Mune Dzimwe Nyika dzeEurope
Matanho matsva ari kuziviswawo muFrance, Germany, uye Republic of Ireland kuyedza kudzivirira mhedzisiro yeOmicron.
Mutungamiri weFrance Jean Castex akati musiyano weOmicron "uri kupararira nekumhanya kwemheni." Mukupindura, France yakatemera zvirambidzo zvekufamba kune avo vanopinda kubva kuUnited Kingdom - nyika yakaoma kwazvo mudunhu iri, paine vangangosvika zviuru makumi maviri neshanu vakasimbisa mhosva dzeOmicron chete nemugovera.
Huwandu hwazvino hweEU hunoratidza kuti Europe yakatoona anopfuura mamirioni makumi masere nemapfumbamwe ezviitiko uye miriyoni 89 yekufa kwakabatana neCOVID.
Kubva nhasi, kwave ne271,963,258 kesi dzakasimbiswa dzeCCIDID-19, kusanganisira 5,331,019 vafa, sezvakataurwa ne World Health Organization (WHO).
Dzimwe nhau nezve Omicron